inkqubo ukwahlukanisa Drywall
Metal stud kunye ulandelele
channel steel Unique
Aluminium udonga & inkqubo yophahla
ibhodi isamente Coloured
ibhodi lwesamente Eqhelekileyo
ibhodi isamente wokudla Wood
ibhodi lwesamente EPS
Iphepha backed ibhodi gypsum
ibhodi amagwebu izakhi
Rock uboya elana
Steel iindleko ezibonakalayo ziyaqhubeka zenyuka
ngomphathi ku 18-08-08
Kutshanje iindleko steel hlalani ukufukuka, ukuthi gqolo kokuhla ubukhulu becala ezingabonakaliyo. Ngoko ke, ukuba kukho nayiphi na imfuneko iimveliso ziintsimbi, ukuze vumeli ngaphambili ngcono.
Steel stud udonga ukubiyela lo yinxalenye yobomi bethu
ngomphathi ku 18-08-01
Ngenxa yokuba iimpawu zalo ezilungileyo, stud steel sekwenziwe isetyenziswa ngokubanzi projekthi yethu yokwakha.
A umzuzu wenzolo ngamaxhoba Greek mlilo
ngomphathi ku 18-07-28
Umlilo imbi Greece iye abanamava engaphaya kweshumi luqale ngoMvulo, nokosa amakhaya kunye neemoto njengoko wayitshisayo nge kummandla Attica unxweme ngeenxa eAthene. abantu Ubuncinane 74 kuqinisekiswa Abafileyo evela imililo kwaye abaninzi nangaphezulu ahlale zilahlekile. Nikelani ingqalelo kuthintelo umlilo, uluhlaza zokhuseleko ...
ngomphathi ku 18-07-24
ngomphathi ku 18-07-19
Kutshanje izinga lotshintshiselwano ayikho izinzile, phezulu yonke imihla. Xa lilonke, isiqhelo liphuma ukususela ngoku.
A window entsha ukusifuna
Ngiyaziqhenya ukuba iqalise website yethu entsha. Bonisa ezinye iimveliso ukuba Changye ivelisa yaye iiprojekthi ezakhiweyo. Ukuba zange weva Changye ngaphambili, qala apha uya usazi kakuhle. Njengoko ishishini uyakhula, siye wakha le website entsha ngokucelwa umthengi yethu ...